Ahoana ny fomba hampitomboana ny fahafahan'ny mailaka mankany amin'ny boaty | Martech Zone
Talata, Septambra 9, 2014 Talata, Septambra 9, 2014 Douglas Karr
Betsaka ny olona tsy mahatsapa fa misy fahasamihafana lehibe eo mailaka mailaka ary mampiditra azy amin'ny boaty inbox. Ny fahafahan'ny mpanome tolotra mailaka handefa ny mailakao dia nofaritana ary refesina toy ny fanaterana. Fa midika fotsiny izany fa nisy ny fifanolanana teo anelanelan'ny mpizara izay nekena ny mailakao. Tsy midika izany fa ao anaty boaty mpamandrika izao. Tsy dia fahita firy ny mailaka manana fahafaha-mivoaka 100% sy fametrahana boaty 0%… miaraka amin'ireo mailaka rehetra mankany amin'ny folder spam. Mila fitaovana toy ny ianao Inbox Informant avy amin'ireo mpanohana anay ao 250ok hahitanao ny fomba fanaovanao izany.
Rehefa mandefa mailaka ho an'ny orinasanao ianao dia antenainao hiseho fotsiny ao anaty boaty mpamaky anao izany, sa tsy izany? Betsaka kokoa ny zavatra azonao atolotra mailaka tsy ampoizinao. Mpamatsy tolotra mailaka (ESP), toa VerticalResponse, manaova zavatra betsaka mba hahazoana antoka fa tafiditra ao amin'ny boaty mailaka ny mailakao, saingy mandray anjara amin'ny fandefasana koa ianao. Ity infographic ity dia manoritsoritra dos sy tsy tokony harahinao hanampiana ny mailaka hataonao ao anaty boaty fa tsy ilay fampirimana Spam izay atahoranao.
Tsy mifanaraka tanteraka amin'ny rehetra ny torohevitra amin'ity infographic ity. Rehefa niasa tamina mpamatsy tolotra mailaka aho dia nanao torolàlana mitovy foana foana izahay; na izany aza, taorian'ny nialanay sy nifaneraserantsika tamin'ny orinasa marobe dia nahita orinasa marobe izahay nanararaotra tamin'ny fomba mahery vaika ny lisitry ny antoko fahatelo ary mampiasa paikady izay hahasarika ny sain'ny mpanolo-tsaina mailaka mpamatsy tolotra mailaka rehetra. Na izany aza, hitanay izy ireo fa tsy nahazo vokatra tsara fotsiny, rehefa novonoina tsara ny fametrahana ny boaty fampidirana azy ireo ary ny fitarainan'ny SPAM dia tsy nisy hafa noho ireo orinasa tsy dia mahery setra.
Nifandray tamin'io tamin'ny alàlan'ny gazety izahay. Navoaka tanteraka nandritra ny volana maromaro, nanolo ny mpamatsy anay ho mpamatsy serivisy mailaka malaza izahay ary nolavin'izy ireo avy hatrany ny lisitray niaraka tamin'ny mpanamarin-toerana ny lisitra super-duper… rafitra manana ny fananan'izy ireo izay natakalony ny olona rehetra ho tsara indrindra. Nangataka tamin'izy ireo izahay handefa hafatra vaovao ary angatahinay hisoratra anarana ao amin'ilay lisitra indray ny mpanjifa tsirairay. Ka… tian'izy ireo handefa fifandraisana mailaka hafa izahay rehefa avy nahazo alalana izahay - tsia!
Niady hevitra izahay mandra-pamelan'ny ESP anay handefa ny lisitray (tsia - tsy VerticalResponse izany). Nandefa ny lisitra izahay… ary tsy nisy na dia iray aza ny fitarainana voarakitra. Tokony ho tadidinao fa ny ESP tsirairay dia manana ny mpizara azy manokana izay manana laza tokony harovany amin'ny vidiny rehetra. Midika izany fa diso foana izy ireo amin'ny lafiny risika aotra. Mampalahelo fa matetika ireo orinasa dia tsy miasa anaty atmosfera aotra.
Tsy mamporisika ny SPAMMING olona tsy ifandraisanao aho. Na izany aza, misy faritra volondavenona mety hahagaga anao fa miasa tsara.
Tags: double opt-inmailaka mailakafandefasana mailakamailaka matetikatatitra momba ny mailakafizarana mailakafisoratana anarana mailakaInboxmisafidy-inamin'ny spamUnsubscribevaliny mitsanganamitsanganawelcome email